जब यी महिलाले पति नपुंसक भएको थाहा पाइन्....
संवाददाता : रारा सञ्चार प्रकाशित मिति : १४ माघ २०७४, आईतवार २२:३५ प्रकाशित मिति : जनवरी 28, 2018
मेरा सबै भाइबहिनीको विवाह भइसकेको थियो । उनीहरुको आआफ्नो परिवार थियो । मेरो उमेर बढेसँगै उनीहरु कहिलेकाहीँ मेरो’bout वास्ता गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्थ्यो । मेरो मनमा पनि माया गर्ने इच्छा थियो तर यी सबै कुरा मेरो कल्पनामा मात्र थियो । मलाई कहिलेकाहीँ मोटी भएका कारण हो कि मलाई कसैले नहेरेको भन्ने लाग्थ्यो ।
जब म ३५ वर्षकी भएँ ४० वर्षको एउटा पुरुष मसँग विवाहका निम्ति आए । उसलाई भेटेकै दिन मैले आफ्ना भावनाहरुका ’boutमा उसलाई सामान्य कुराहरु भनेँ । तर उसले यो विषयमा ध्यान दिएन । न त यसको ’boutमा कुनै जवाफ नै ।
यद्यपि यो कुराले मलाई अस्थायी राहत दियो । तर यो ’bout नसोची बस्न मलाई सहज थिएन । मेरो सम्पूर्ण आशा, सपना र इच्छा दिनदिनै टुक्रिरहेका थिए । मेरो छटपटीको मूल कारण यौन जीवन मात्र थिएन ।
यी सबै कुरा कोसँग भन्नुपर्ने हो मलाई त्यो पनि थाह थिएन । यी सबै कुराहरु म मेरो आफ्नै परिवारलाई पनि भन्न सक्ने अवस्थामा थिइनँ । ’cause सबैले म धेरै खुशी छु भन्ने सोचेका थिए । तर मेरो धैर्यताले सीमा नाघ्दै थियो । मैले यसको समाधानको बाटो पहिल्याउनै पर्ने थियो ।
त्यसपछि मैले यस’bout गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्ने भयो । जसरी पुरुषहरु महिलाको सुन्दरताको आँकलन गर्छन्, मैले पनि आफ्नो श्रीमानको शारीरिक गुणहरुका ’bout किन अवलोकन नगर्ने ? भन्ने कुरा मेरो मनमा आउन थाल्यो ।
म त्यस्तोे पुरुषको पर्खाइमा छु । त्यो समयसम्म म आफ्ना साथीहरुसँग यौन जीवनको ’boutमा कुरा गरेर खुशी छु ।
देशभरका ३६% बालबालिका पुड्कोपनको शिकार बन्दै, प्रदेश ६ सबैभन्दा पीडित
जब मेरा पति एक महिलासँग सम्बन्धमा बसे…
सुन्दर बडिमालिका ! Badi Malika Bajura (Tourism) (भिडियो सहित)
१४ माघ २०७४, आईतवार २१:४५
अछामको बिकास रहफबाट सुरु गर्छु: बोगटी
६ मंसिर २०७४, बुधबार ११:१८
श्रीमती खोज्न पत्रकार सम्मेलन, सबैले सेयर गरी खोजिदिनुहोला !
२४ पुस २०७४, सोमबार १७:११